जो नक्कली सर्टिफिकेट र नागरिकता देखाएर सक्कली डिएसपी बने ! – Dainik Sangalo
October 25, 2020 417
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा नक्कली सर्टिफिकेट र नागरिकता देखाएर कृते गरी सरकारी लाभ सुविधा लिएको अभियोगमा एक डिएसपी विरुद्ध मुद्दा परेको छ ।
डिएसपी रमेशबहादुर सिंहको नागरिकता तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको खुलेपछि उनी माथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनी विरुद्ध नागरिकता तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति सच्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग रहेको छ ।
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट विज्ञापन भएको प्रहरी निरीक्षक पद ओहदाको लागि दरखास्तका साथ झुट्टा विवरण पेस गरी सरकारी लाभ सुविधा लिएको पाइएको छ। नीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजाय मागदाबी विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
को को हुन् सिंह ?
विभिन्न राजनीतिक दलको झुण्डका आडमा अख्तियारको काण्ड मिलाएर डिएसपीमा बढुवा भई उनी तत्कालिन अवस्थामा बाँकेको कोहलपुर ईलाका प्रहरी कार्यालयमा आएका थिए ।
कोहलपुर आइसकेपछि उनले यहाँको शन्तिसुरक्षा अमनचयनका नाममा ठूलै रकम असुली गरेको खुलेको थियो । गोरू तस्करदेखि दलाल र यहाँका व्यवसायी तथा ठेकेदारहरूसँगको मिलमतोमा डिएपी सिंहले करोडौं रूपैयाँ असुली गरेका समाचारहरु बाहिरीएका थिए ।
बाँकेको शम्सेरगन्जका एक युवकलाई बिना कारण समातेर गोली समेत ठोकेका डिएसपी सिंहका बिरूद्ध अहिलेपनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै छ ।
समाचार लेखेकै कारण नेपालगन्जका एक पत्रकारलाई कोहलपुर चौराहमा लगेर गोली ठोक्ने समेतको धम्की दिएका डिएसपी सिंह एकदमै अराजक र घुसखोरी भएको उनीसँगै काम गरेका प्रहरीहरू बताउँछन् । उनले कोहलपुरमा रकम असुलीका लागि सादा पोशाकमा दर्जनजति आफू मातहतका प्रहरी खटाएका थिए । यतिमात्रै होइन उनले कोहलपुर ट्राफिकबाट समेत केही हिस्सा असुल्दै आएको समाचारहरु समेत खुलेको थियो।
आफूलाई प्रहरी बृत्तको डन सम्झदै चोक–चोक र गल्लीमा दादागिरी गर्दै हिडेका तिनै डिएसपी रमेशबहादुर सिंह अहिले फेरी अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । अहिले महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धमा कार्यरत डीएसपी रमेशबहादुर सिंहमाथि अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
डिएसपी सिंहलाई ललितपुरमा प्रहरी निरीक्षक हुँदा एक लाख ३० हजार घुससहित अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
Prevआज’को विदेशी मुद्रा’कति पुग्यो हेर्नु*होस् …कुन देश’को कति ?
Nextविज्ञापनरहित नहुने १८० भन्दा बढी विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द
कालीमाटीमा सस्तो, बजारमा महंगो तरकारीको मूल्य ?